डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घट्यो, आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने – Halkhabar kura
१९ चैत्र २०७६, बुधबार २०:३०
डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घट्यो, आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु. १० का दरले घटाएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै निगमले पनि इन्धनको मूल्य घटाएको हो । घटेको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ ।
निगमले डिजेल तथा मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु. ८५ र पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर रु. ९६ तोकेको छ । हवाई इन्धन (आन्तरिक उडानतर्फ) प्रतिलिटर रु. १५ ले मूल्य समायोजन गरिएको छ । निगमले आन्तरिकतर्फको
वाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु. ७५ तोकेको छ ।
यस्तै बाह्य उडानतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य ०.९५ अमेरिकी डलर तोकिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । एलपी ग्यासको मूल्य हाललाई यथावत राखिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु. १० का दरले घटाएको छ ।
Previous चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको ओम्नीको टेन्डर रद्द, पाँच करोड धरौटी जफत
Next कोरोना भाइरसले एकै दिन पाँच हजारको ज्यान लियो, अमेरिकामा मास्कको अभाव